အရည်အသွေးမြင့်အိတ်ဆောင် Co2 F ...
Fractional Co2 လေဆာယောဘ ...
1060nm4Diode Lase ကိုကိုင်တွယ်သည်
Picosecond လေဆာတက်တူးတု ...
808nm Diode လေဆာရောင်ခြည်ဆံပင်ပြန်လည် ...
1550 nm Er Erbium Glass အပိုင်းအစလေဆာ / ဖိုင်ဘာလေဆာမျက်နှာပြင်ပြန်လည်နုပျိုစေသောအရေးအကြောင်းများဖယ်ရှားစက်
လူ့အရေပြားသည်အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မှစ၍ နှစ်စဉ် ၁ မီလီမီတာလျော့ချပေးသည်။ ၁၅၅nm erbium ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာလေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုသီအိုရီဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရေပြားသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အသက် ၆၀ တွင် ၃.၅ စင်တီမီတာခန့်လျော့ကျသွားသည်။ ပါးစပ်ကတော့အရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်။ 1550nm dot-matrix laser wrinkle remover သည်အရေပြားပေါ်ရှိတစ်သျှူးအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက်ချောသောအဆီများမှတစ်ဆင့်အရေပြားပေါ်ရှိတစ်သျှူးအသစ်များဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်ချောသောချွေးများမှ (1cmX 1cm အထိ ၇၈၄ တက်ကြွသောအချက်များအထိ) ကောင်းသောအပေါက်များကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။
Ipl Opt Laser Hair Removal Machine အမြဲတမ်းဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းအလှအပပစ္စည်း
ကုသမှုနိယာမမျိုးဆက်သစ် OPT အလင်းသည်အရောင်အစက်အပြောက်များ၊ သွေးအမျှင်များနှင့်ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် photolysis နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ရန်အရေပြားအရေပြားအပေါ်ယံအရေပြားအရေပြားအရေပြားရောဂါအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကြိမ်နှုန်းမှထုတ်လွှတ်သောကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည်အရေပြားဆဲလ်များ၏ရေမော်လီကျူးများ (ရေမော်လီကျူးအမြောက်အများ၊ ဝင်ရိုးစွန်းမော်လီကျူးများနှင့်အားသွင်းထားသောအိုင်းယွန်းများ) ပေါ်ရှိမြန်နှုန်းမြင့်တုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၄၅-၆၀ ဒီဂရီအထိအပူစွမ်းအင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည် မြန်နှုန်းမြင့်သော rotat မှတစ်ဆင့် ...
အရည်အသွေးမြင့်အိတ်ဆောင် Co2 အပိုင်းအစလေဆာရောင်ခြည်အင်္ဂါဇာတ်တင်းတင်းအမာရွတ်မှဲ့အရေပြားနုပျိုစက်
Smart scanning head၊ အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ခြင်းနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း။ အဓိကအားဖြင့်အရေပြားတုတ်ခြင်းနှင့်ထိုးခြင်းလက်သည်းများ၊ ပေါင်းစပ်နီဗူးများနှင့်အရေပြားအတွင်းပိုင်း nevus များစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုသောခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ။ မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်များ ၁, ၃၆၀ ဒီဂရီနှင့် ၉၀ ဒီဂရီကုသမှုများပြုလုပ်ထားသောကြောင့် Gold Plated ကျောရိုးရှိသတ္တဝါခန္ဓာကိုယ်လေဆာရောင်ခြည်သည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မီးယပ်ရောဂါကုသမှု၊ vulva labia ကုသမှု၊ အပြင်ဘက်တွင်လေယာဉ်ပျံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုစပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ အတွင်း၌ရွှေ ၂၂ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂဟေဆက်များပါ ၀ င်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုကိုပိုမိုစိတ်ချရသော၊
Erbium Glass အပိုင်းအစလေဆာရောင်ခြည် ၁၅၅၀nm အလှအပသုံးပစ္စည်းများ Non-Ablative Wrinkles / Acne အမာရွတ်များဖယ်ရှားခြင်းမျက်နှာသုတ်ခြင်း
1550nm erbium glass fiber laser ၏ကုသမှုသီအိုရီ၎င်းသည်လှိုင်းအလျား ၁၅၅၀nm ရှိပြီး Erbium ဖန်လေဆာ laser စနစ်ကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ 1550nm ၏လှိုင်းအလျားသည်အရေပြားအပေါ်ယံရေမှစုပ်ယူပြီးတစ်ရှူးအတွင်းအပူချိန်မြင့်မားစေသည့် epidermis မှတဆင့်အပူစီးဆင်းမှုကို derma သို့နက်ရှိုင်းစွာသက်ရောက်စေသည်။ တစ်ရှူးအတွင်း၌အပူချိန်မြင့်မားစေသည်။ တစ်သျှူးသည်ညင်ညင်သာသာအပူပေးပြီးဆဲလ်၏ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ undamaged.The လေဆာရောင်ခြည်၏ပြင်းထန်သောအပူစွမ်းအင်သည်ဆိကြည်သော gl ကိုရွေးချယ်သည်။
Fractional Co2 လေဆာရောင်ခြည်ပိုမိုပြင်းထန်လေဆာလေဆာရောင်ခြည်သုံး CO2 လေဆာရောင်ခြည်အမာရွတ်ဖယ်ရှားရေးစက်
Smart scanning head၊ အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ခြင်းနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း။ အဓိကအားဖြင့်အရေပြားတုတ်ခြင်းနှင့်ထိုးခြင်းလက်သည်းများ၊ ပေါင်းစပ်နီဗူးများနှင့်အရေပြားအတွင်းပိုင်း nevus များစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုသောခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ။ မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်များ ၁, ၃၆၀ ဒီဂရီနှင့် ၉၀ ဒီဂရီကုသမှုများပြုလုပ်ထားသောကြောင့် Gold Plated ကျောရိုးရှိသတ္တဝါခန္ဓာကိုယ်လေဆာရောင်ခြည်သည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မီးယပ်ရောဂါကုသမှု၊ vulva labia ကုသမှု၊ အပြင်ဘက်တွင်လေယာဉ်ပျံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုစပ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေရောင်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂဟေဆက် ၂၄ လုံးကိုအသုံးပြုထားသည်။
ရောင်စုံဆေးမင်ကြောင်ထိုးဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Picosecond လေဆာ။ အရေပြားပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ခြင်း၊ ၀ က်ခြံအမာရွတ်များ၊ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံအရေပြားကဲ့သို့သောအားလုံးနီးပါးကျရောက်ခြင်းနှင့်အရောင်အသွေးစုံသည့်တက်တူးများကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Wrinkle and Melisma စစ။ ခေါင်းမာသောအသက်အရွယ်အစက်အပြောက်များငြီးငွေ့? ပိုပြီးနုပျိုသောအသွင်အပြင်ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြစ်သောနောက်ဆုံးပေါ် Picosecond လေဆာကို အသုံးပြု၍ အစက်အပြောက်များနှင့်မလိုချင်သောတက်တူးများကိုဖယ်ရှားရန်မှာဘယ်တော့မျှလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ခြယ်ပစ္စည်းနှင့်တက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေးနည်းပညာအမှန်တကယ်ရှိပါတယ် ...
808nm Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်
၁,၁၀၀% သောဂျာမနီသည် Laser Stacks 2၊ Sapphire Crystal၊ အကောင်းဆုံးအအေးခံခြင်း ၃။ ၁၂.၂ မီလီမီတာအရွယ်အစားကြီးမားသည့်အစက်နှင့် IN-Motion ကုသမှုနည်းလမ်း၊ အမြန်ဆုံးကုသမှုမြန်နှုန်း ၄.၈၀၈ မီလီမီတာသုံးဆလှိုင်း။ ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အရေပြားအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် achevinq အကောင်းဆုံးရလဒ် Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းနည်းပညာသည်အလင်းနှင့်အပူရွေးချယ်မှုကိုအခြေခံသည်။ Laser သည်အရေပြားမျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ ဆံပင်အရင်းအမြစ်သို့ရောက်အောင်သွားနိုင်သည်။ အလင်းသည်စုပ်ယူပြီးအပူကိုပျက်စီးစေသော hai သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
1060nm4Diode လေဆာရောင်ခြည်ကိုယ်ထည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျည်စက်ကိုကိုင်တွယ်သည်
1060nm diode လေဆာကိုယ်ထည်ကိုပါးလွှာသောစက်သည်လေဆာအခြေပြုနှင့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိသောကုသမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆီဆဲလ်များကိုတိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်လျှော့ချရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပါ ၀ င်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုမှာပျမ်းမျှ ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးတစ်ကြိမ်တွင်multipleရိယာများစွာကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ 1060nm diode လေဆာစနစ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သော Hyperthermic နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ၁၀၆၀nm လေဆာကိုအသုံးပြုပြီးအဓိကအားဖြင့် adipose တစ်ရှူးများကိုခေါင်းမာသောအဆီများကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဖန်ပြွန်နှင့်အတူ Fractional Co2 လေဆာစက်
Fractional Co2 လေဆာအင်္ဂါဇာတ်တင်းကျပ်စက်
အသိဉာဏ်ရှိစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်ခေါင်း၊ သော့အသစ်လုပ်ဆောင်မှု၊ ဂရပ်ဖစ်ပြောင်းရန် M ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြင်ဆင်ရန်သုံးစက္ကန့်ကြာအောင်ကြာပါက '+' သည်ပုံ၏အရွယ်အစားကိုတိုးနိုင်သည်။ '-' သည်ပုံအရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ ဖောက်သည်များလည်ပတ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ လေဆာထုတ်လွှင့်ခြင်း - အမေရိကန်မှလေဆာတင်သွင်းခြင်း၊ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်သည် 100W သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အသစ် dimmer bracket ကစက်ကိုဖြိုဖျက်ခြင်းမရှိဘဲမှိန်နိုင်ပါသည်။ ပူးတွဲပီသသောလက်မောင်း ၇ ခု၊ ​​360Freely operating, စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုများစွာလျှော့ချသည်။